USergio Gallego | | Isimo Sezulu, Izimo zezulu
Ezinsukwini ezimbili ezedlule isifundazwe saseMalaga samangala ngesimo sezulu esijwayelekile kakhulu endaweni yaseCantabrian: i-galerna. Le yimimoya enamandla engafinyelela kumakhilomitha angama-60 ngehora ngalinye kubangelwa ukuba khona kwenqwaba yomoya obandayo nomswakama obangela ukuthi umswakama ufinyelele kuma-75%.
Isimo esenzekile eMalaga sinamandla amancane kakhulu kunaleso esenzeka enyakatho Enhlonhlweni, ngakho-ke ibizwa ngokuthi i-mini gale.
Ama-gales yizimo ezejwayelekile zesimo sezulu sendawo yaseCantabrian futhi zibonakaliswa yimimoya enamandla ehambisana nokushintsha okungazelelwe kwamazinga okushisa neziphepho ezingalindelekile. EMalaga, le nto ibinamandla amancane njengoba imimoya ifinyelele kumakhilomitha angama-50 ngehora kanti amazinga okushisa ehle ngama-degree ayi-5 kuya kwayi-10. Kungakho endaweni yaseMedithera baziwa njengamagalari amancane.
Kule ndawo, into enjalo yenzeka lapho ngokungazelelwe umoya osuka entshonalanga ushintsha ngokuzumayo emoyeni wasempumalanga. Isisindo esibandayo singena endaweni esempumalanga naseMedithera enhlonhlweni kubangela ukuvunguza komoya okunjalo nomswakama omkhulu. Njengokulangazelela, kufanele kuthiwe igama elithi galerna livela e-galerne yaseFrance futhi lisho umoya ovunguza uvela enyakatho-ntshonalanga.
Abahlali baseMalaga baphila futhi bahlupheka kulezi zinsuku izenzakalo zezulu ezimbili ezihluke ngokuphelele. Ngempelasonto bahlushwe yilokho okubizwa ngokuthi yi-terral ngamazinga okushisa angaphezu kwama-30 degrees futhi ngomuzwa wokucinana impela kuyo yonke imvelo ngenkathi ezinsukwini ezimbili ezedlule behlushwa i-mini gale enezikhathi ezinamandla nokwehla okuphawulekayo emazingeni okushisa. Lezi yizinto ezimbili ezejwayelekile ezinyangeni zasentwasahlobo.
I-Windguru Tarifa, iyini nokuthi ungayithinta kanjani?